Xog: Shidaalkii gobolka Banaadir oo lagu kala iibsanayo suuqyada Muqdisho - Caasimada Online
Home Warar Xog: Shidaalkii gobolka Banaadir oo lagu kala iibsanayo suuqyada Muqdisho
Xog: Shidaalkii gobolka Banaadir oo lagu kala iibsanayo suuqyada Muqdisho
Muqdisho (Caasimada Onlin) – Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in Maamulka Gobolka Banaadir uu ka gaabinaayo la xisaabtanka Guddoomiye waaxwwdyada Maamulka.
Wararku waxa ay sheegayaan in xisaabtan la’aanta ka jirta Xarunta maamulka ay sababtay in Guddoomiye waaxeedyada Xarunta maamulka ay ku tagrifalaan Hantida Qaranlka oo aan xiligaani la xisaabin.
Sargaal ka tirsan Guddoomiyayaasha oo ka gaabsaday adeegsiga magaciisa ayaa xaqiijiyay in Shidaalka Gobolka lagu kala iibsanaayo goobaha lagu iibiyo Shidaalka ee magaalada Muqdisho.
Sargaalkaani ayaa xaqiijiyay in Shidaalka Gobolka lagu shubu Suuqyada lagu iibiyo Shidaalka waxa uuna cadeeyay in shaqsiyaad gaara oo ka tirsan Keydka Shidaalka uu arrintaani heshiis hoosaad kula galay ilaa 6 Kaalin shidaal kuwaa oo dhaqaale jaban lagu siiyo Shidaalka loogu tallo galay inay isticmaalan mas’uuliyiinta maamulka iyo shaqaalaha.
Waxa uu intaa ku daray in Shidaalka lagu cabeeyo Gaagadaha waaweyn kuwaa oo xiliyada Habeenkii loo daad gureeyo Suuqyada lagu iibiyo Shidaalka sida uu xaqiijiyay Sargaalka.
Keydka Shidaalka ayaa la sheegay inuu gacanta ku hayaan Shaqsiyaad ay qaraabo dhow yihiin Guddoomiyaha Gobolka kuwaa oo lagu naas-nuujinaayo Hantida Qaranka.
Xarunta Maamulka Gobolka Banaadir ayaa waxaa kusii kordhaaya ku tagrifalka Hantida Qaranka oo aan maamulka u xiisabsaneyn, waxaana jira cabashooyin kasoo yeeraya Shaqaalaha maamulka oo aan mushaar qaadan muddo 5bil oo xiriir ah, iyadoo ay xusid mudan tahay in dhaqaalaha ugu badan dalka uu gacanta u galo maamulka.